AD-6210 Dual 10-inch telo-lalana enina enina enina feno feno mpandahateny watts lehibe rafitra fialamboly fialamboly an-trano
Valiny matetika: 40Hz-18KHz
Fanamboarana: mpamily LF 2 × 10 ", mpamily MF 2 × 3", mpamily HF 2 × 3 "
Impedance nominal: 4Ω
Fielezana: 120 ° × 100 °
Refy (WxHxD): 385 × 570 × 390mm
Lanja net: 21.5kg
OK-470 10-inch telo-lalana feno KTV rafitra mpandahateny fialamboly
Mpandahateny fivezivezena misy elanelana telo manaitra ny sofina roa, ho an'ny feo mahafinaritra kokoa, ny mpandahateny dia tsy hoe mafy fotsiny, fa ilaina koa ny manana feo mahafinaritra. Mamorona rafitra fitaovana matihanina mety amin'ny toetran'ny fihiran'ny Azia Atsinanana! Safidy fitaovana tsara kalitao, asa-tanana vita kanto, Namboarina tamim-pitandremana ny fitaovana tsirairay, ary taorian'ny tsy fahombiazana sy famerenana tsy hita isa, dia nivondrona ho iray manontolo. Nanolo-tena hatrany izahay amin'ny "marika, kalitao, matihanina amin'ny ...
WS Series 18-inch ultra low frequency subwoofer passive big watts mpandahateny bas
WS series ultra-low frequency mpandahateny dia nohazavaina tsara tamin'ny alàlan'ny tarika mpandahateny avo lenta eto an-toerana, ary ampiasaina indrindra amin'ny rafitra haingam-pandeha feno ho famenon'ny tarika matetika faran'izay ambany. Izy io dia manana fahaiza-mihena avo lenta faran'izay ambany ary natao manokana hanatsarana tanteraka ny basin'ny rafitra fanamafisam-peo. Izy io dia mamerina ny vokatra feno sy mahery vaika an'ny bass tafahoatra. Izy io koa dia manana valiny matetika sy famolahana valiny malefaka. Izy io dia mety ho mafy amin'ny heriny lehibe Mbola mitazona ny vokatra bass tonga lafatra indrindra sy ny fanamafisam-peo amin'ny tontolo miasa mafy.
GL Series Dual 10-inch roa-lalana feno-pitenenana finday fampisehoana mpandahateny andalana mora mpandahatra rafitra mpandahateny
Ny andian-tsarimihetsika GL dia rafitra zana-kazo miendrika zotra roa miaraka amin'ny halehibeny, ny lanjany maivana, ny halaviran'ny vinavina, ny fahatsapana avo, ny hery miditra, ny haavon'ny tsindry mafy, ny feo madio, ny fahamendrehana mafy, ary na ny rakotra feo eo amin'ny faritra aza. GL series dia natao manokana ho an'ny teatra, kianja, fampisehoana an-kalamanjana ary toerana hafa, miaraka amina fametrahana mora sy mora. Mangarahara ny feony ary matevina, malefaka sy malefaka matetika ny hatezerana, ary ny sanda mahomby amin'ny halaviran'ny famoahana feo dia mahatratra 70 metatra miala azy.